Mahendra Mahak Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Mahendra Mahak
कथा : लङ्गूरबुर्जा
~महेन्द्र महक~ आफ्नो सम्पूर्ण राज्य हारेका थिए युथिष्ठिरले जुवाको खालमा । अन्ततः द्रौपदीलाई पनि दाउमा लगाएका थिए । द्रौपदीलाई पनि हारे । दुःशासनले द्रौपदिको चिरहरण गरेपछि मात्रै महाभारतको सूत्रपात भएको हो क्यार ! यो पौराणिक कथा थियो । जहाँ जुवाडे … Continue reading →
कथा : काम गर्ने केटी
~महेन्द्र महक~ धनीको धन/गरिबको सपना निर्मलाले लक्ष्मीको आमालाई वचन दिइन्, लक्ष्मीलाई पढाइदिने । बदलामा लक्ष्मीले निर्मलालाई घरभित्रको ‘सामान्य’ काममा सघाइदिनुपर्ने भयो । गरिबी लक्ष्मीकी आमाको सबैभन्दा ठूलो शत्रु थियो । र, पढ्नु लक्ष्मीको सबैभन्दा ठूलो सपना । आठ पास गरेपछि अगाडि पढ्न गाउँमा न … Continue reading →
Posted on March 2, 2016 by Sahitya - sangrahalaya
~महेन्द्र महक~ गोलो गोलो अनुहार । आँखामा गाजल । सानो ल्वाङ्गे फुली । रातो लिपिस्टिकले कामुक देखिएका गोल गोल रसिला ओठ । नुहाएर सुकाउन फुक्का छोडेको भिजेको कपाल । कसिलो छाती । रातो कुर्ता सलवारमाथि कालो रंगको छालाको ज्याकेट । … Continue reading →
Posted on February 21, 2016 by Sahitya - sangrahalaya
~महेन्द्र महक~ ……..त्यसपछि उनीहरूले मेरी आमाको लाश घिसार्दै यहाँ ल्याए । जहाँ पहिलादेखि नै तीन फिटको खाडल तयार थियो । गर्भाशयभित्र मैले अर्धचेत अवस्थामा अनुभूति गरिरहेँ–घिस्रिरहेको । अनि म पर्खिरहेँ गर्भाशयमा– कहिलै नजन्मिनका निम्ति ……..। तर, आज इतिहासको अदालतमा यी … Continue reading →
~महेन्द्र महक~ जनकको स्पर्श शान्त पोखरीमा ढुङ्गा हान्नु थियो । मेरो शरीरको रोम–रोम तरंगित भएको थियो । मनको कुनामा वर्षौंदेखि लुकेर बसेको उसको तस्वीर फेरि उज्यालो भएको थियो । शुभ्र–शान्त–स्निग्ध । मैले ओड्ने रंगको व्याख्या । कुल्टा–कुसाइत–अलच्छिना मेरो जीवनले बोकेका … Continue reading →
कथा : एउटा पासपोर्ट अनुहार
Posted on December 15, 2015 by Sahitya - sangrahalaya
~महेन्द्र महक~ अक्टोबर १०–१५, आबुधाबी । उनको अनुहारमा नेपालको तस्विर थियो । दशैंतिहारको यस अवसरमा लाखौं मान्छेहरु घर फर्किरहेका छन् । परदेशीहरु स्वदेश फर्किरहेका छन् । शहरमा बस्नेहरु गाउँ फर्किरहेका छन् ।
~महेन्द्र महक~ तिहारमा बहिनीका लागि कस्तो उपहार पठाउने होला ? मैले यस विषयमा केहि सोच्नसकेको थिइन । तर, दसँैंपछि घर फर्किन लागेको गाउँले एकजना साथीलाई मेरो सामान पनि लगिदिनका लागि भनेको थिएँ । ज्वाइँलाई पनि ‘कुनै सामान घर पठाउनु छ … Continue reading →